Areti-mifindra, Fifandonana Sy Ireo Fotsy Hoditra Mpamonjy: Ny Endrik’i Afrika Nasiana Fanovàna Araka Ny Hollywood · Global Voices teny Malagasy
Nandika (fr) i Marnie Seg
Voadika ny 17 Desambra 2018 11:18 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, Deutsch, 日本語, Ελληνικά, English
Ny fihanaky ny aretina Ebola tao Afrika Andrefana tsy ela akory izay dia nahafaty olona miisa 712 farahakeliny hatramin'izao, heverina misy anjatony hafa ihany koa maty noho ireo antony ireo. Raha toa mihanaka manerantany ny tahotra ny viriosin'io aretina io, ity krizy ara-pahasalamam-bahoaka tena izy ity dia mampahatsiahy ny krizy sarintsariny notontosaina ho sarimihetsika efa ho 20 taona izay, izay nolalaovin-dry Dustin Hoffman, Rene Russo, Kevin Spacey ary Morgan Freeman, mba tsy hanononana afa-tsy ireo.
Raha azo antoka hoe nanitatra ny fijeriny ny tanibe afrikana i Hollywood nanomboka tamin'ilay sarimihetsika tamin'ny taona 1988, “Un Prince à New York” niaraka tamin'i Eddie Murphy, dia tena tsy fahita firy ny fanaovan'ireo mpanatontosa ao Hollywood fijery manakaiky ny endrika tena izy amin'ilay tanibe. Toy ny ady ataon'ny mpilalao sarimihetsika Ben Affleck, sahala amin'ny toa vitsy ny mpamokatra sarimihetsika hollywood no liana amin'ny hevitra hoe hanao sarimihetsika iray mikasika ny tanibe afrikana. Tsy tokony hadinoina fa i Hollywood dia tomponandraikitra foana amin'ny endrik'izao tontolo izao jerena avy avy amin'ny fijery tandrefana.
Nifarana ny fotoana izay nilazàna ilay tanibe ho ‘Ivon'ireo Haizimpito’, nefa mipetraka hatrany eo ambonin'ireo sarimihetsika vokatra vao haingana ny fahatsapana amin'ny ankapobeny hoe toerana iray tsy azo antoka ilay tanibe. Mbola ho hita eo izay ho vokatr'io fijery io eo amin'ny lafiny ara-toekarena sy ireo fifandraisana iraisam-pirenena. Saingy ilaina ny manontany, noho ny tahotra ny viriosy Ébola mety hofoanan'ireo orinasa mpitatitra an'habakabaka haingana ve ireo sidina raha toa ka tany amin'ny tanibe hafa io nitranga? Ary vokatry ny tahotra ny viriosy ve ny fanapahankevitra hanafoana ny sidin'ny ekipa Basket Amerikàna ho any Sénégal? – nefa toa tsy tratran'ny viriosy i Sénégal – fa noho ny fiparitahana fotsiny na ireo ahiahy amin'ny ankapobeny mikasika ny fahasalamam-bahoaka ao amin'ny tanibe manontolo?
Tsy midika akory izany hoe tsy tokony ho raisina tena matotra ny resaka Ébola. Tena marina ny zava-misy ary tena miha-mampiahiahy hatrany, miaraka amin'ny fanambaràn'ny filoham-panjakana Libiàna Ellen Johnson-Sirleaf fa ny Ébola dia raharaha maika eo amin'ny firenena ary tokony hampitombo avo roa heny ny ezaka ataony mba hahatsapana ny ho fisorohana aminy ireo firenana manodidina toa an'i Côte d'Ivoire. Nefa ny fitantarana mikasika an'i Afrika mankafy hatrany an'ireo fihetsika tahaka an'ireo voalaza amin'ity bitsika nalefan'ny The Economist ity:
Manan-danja ny fahitàna satria tamin'ny farany, mifanohitra amin'ny fanjerena baomba mba hisakanana viriosy, tahaka izay asehon'ny sarimihetsika “Alerte”, ny fomba tena mahomby indrindra ao anatin'ny tontolo tena izy mba hisakanana ny fihanaky ny aretina dia mety “ho ny fananana bebe kokoa arotanana sy ireo fanjaitra azo antoka” tsotra fotsiny izao.
Fitantarana iray hafa manerana an'i Hollywood dia ilay mikasika an'i Afrika ravan'ireo fifandonana. Raha tao amin'ilay tanibe, nitombo tao anatin'ireo taona vitsivitsy ny herisetra, nanana tombony ny mpitsidika iray tafalatsaka tanaty fifandonana tany amina faritra iray, na iza io na aiza, tahaka izay asehon’ity sarintanin'ireo toerana itrangan'ireo fifandonana mitàm-piadiana manerantany ity:
Ny sarimihetsika “Tears of the Sun” dia mampiseho firenena afrikana iray, izay hatry ny fahagola no niaina herisetra, izay ahitàna ireo Tandrefana miezaka mamonjy aina. Ao anatin'ny iray amin'ireo ampahany, i Lieutenant A.K Waters, lalaovin'i Bruce Willis, miteny fa:
Ilaina ao Hollywood ny fomba hafa iray vaovao hanehoana an'i Afrika. Hita tokoa fa tena maneho ny zavamisy mitranga tsy ela akory ao Afrika ny ‘Invictus’, iray amin'ireo sarimihetsika tena ankafizina, izay tsy ahitàna na kely monja aza ny fidiran'ny avy any ivelany. Ny Invictus dia tantara taorianan'ny Apartheid, rehefa lasa firenena iray tena nitambatra i Afrika Atsimo. Rehefa nodinihina tsara, ny tononkalo izay nisintonana ny lohatenin'ilay sarimihetsika, dia milaza amin-kery fa: